एउटा कुरो भनौ दिपे ! ठुस्किएर उतातिर फर्किएकी उनले म तिर नहेरी बोलीन ।
मन लागे हजारै भन न किन एउटा नि म उतैतिर सरेर उनका केसहरु खेलाउन थाले । थामडाँडाको हरियो चौर , धौलागिरी हिमाल को मनमोहक दृस्य अनी उनको समिप अरु मलाई के चाहियो र संसारकै भाग्यमानी प्रेमी थिए म ।
“ बाबा कोरिया बाट नफर्किने गरी आउने रे अब आमाले भित्र भित्र केटो खोज्दै हिंड्नु भएको छ रे मेरो बिहेको लागि ” ऊ मेरो काखमा पल्टिदै सुस्केरा हाल्न थाली । उनका राता गालामा भयका रंगहरु दौडिरहेको प्रस्ट देखिन्थे ।
किन टेन्सन ! म नै केटो बनेर तिम्रो आमाले खोजेको ठाउँमा जाउला नि हुन्न ! म जिस्किन खोजे
तिमी केटाहरु कहिले पनि सिरियस हुँदैनौ ! उठेर केस मिलाउदै जाउँ अब त साँझ परिसक्यो भन्नथालिन । मलाई भने छुट्टीन मनै थिएन । समय पनि कती छोटो कुन्नी ? तल बेनिबजार तिर झिलमिल बिजुली बत्ती बलिसकेका थिए ! ओहो आकसमा पनि तारा झुल्किसकेछन । हामी कन्थराजथानको धारामा पानी पिएर आ आफ्नो घर तिर लाग्यौ ।
घरमा पुग्दा आमाले खाना पस्केर मलाई कुरिरहनु भएको रहेछ । खाएर कोठातिर छिरे , बत्तिको उज्यालोमा टेबल माथिको हरियो रहदानी टल्किरहेको थियो । अस्ती मात्रै सरकारलाई ५ हजार दाम तिरेर बनाएको थिए पल्लोथरका झिल्के दाइले बिदेश पठाइदिन्छु भनेर । अघी सोमाले भनेका कुराहरु ले मनमा पिरो पस्यो । दुई चार बर्षा बिदेश गएर पैसा कमाएर उनीलाई नै बिहे गर्ने योजना थियो मेरो । घरको स्थिती सम्झे दमको बिमारि ले ओछ्यानमा पल्टिएका बुढा बाउलाई सम्झिए , आफुले नखाएर हामीलाई पेटभरी खुवाउने आमाको मलिनो अनुहार अनी ति कलीला भाईबहिनीहरुलाई सम्झे । देशमा माओवादीहरुको जनयुद्द चर्केको छ न जागिर पाईन्छ न पढाई नै सकिएको छ । मेरो अनुहार मा चिट चिट पसिना आयो ! उफ ! ब्यर्थै उनीलाई माया गरेछु जस्तो लाग्यो ।
लामो सुस्केरा लिए ! अम्खोरा तानेर पानी पिए प्यास मेटिए पनि सन्ताप को तिर्खा बढेर आयो । बत्तीतिर नजर डुलाए पुतलीहरु झुम्मिरहेका थिए । बल्नु पर्छ र मात्रै सबैले देख्छन म नि पुतलीहरु झै मुन्छेहरु लाई झुम्माउन बल्न सिक्नु पर्छ । एक संकल्प गरेर निदाए जसो तसो ।
उनको १० क्लासको टेस्ट चलिरहेको थियो मन भएर पनि हामी भेट्न सकेका थिएनौ । उनिले धारामा पानी भर्दा नजर मेरो घरतिर तेर्साउथिन यता म उज्यालो भयो कि आँखाहरु उनकै घरको बार्दाली तिर तन्काउथे । ५ मिनेटको दुरिमा उभिएका हाम्रा घरहरु कोषौ टाढा लाग्थे मलाई । लुकेर भेटौ भने पनि कसैले देखे भने गाउँ भरीकालाई खाजा पुग्थ्यो । उनको परिवार हुनी खानि थियो म गरीब परिवारको जेठो छोरो । उनिलाई जती खुशी थियो जिन्दगीको त्यती नै बढी मलाई जिम्मेवारि पनि । शायद त्यसैले पनि होला हाम्रो प्रेम थाहा हुनेहरु ले जिस्काउने गर्थे तिमीहरुको यात्रा दुई दिनको हो तर उनिले सधैं भन्ने गर्थिन यो जुनी त के सात जुनी पनि म तिम्रै हुनेछु दिप ! म उनिले दिएको बचन सम्झिदा आफुलाई खुब भाग्यमानी ठान्थे । हाम्रो प्रेमको सुरुवात पनि अचम्म तरिकाले भएको थियो । एकदिन उनी मलको डोको बोकेर खेतमा जादैथिन हामी साथीभाइ खोलामा पौडी खेलेर फर्किदै थियौ । खुट्टा चिप्लिएर उनी लड्न पुगिन, मल को डोको घोप्टियो मैले गएर उठाइदिए उता केही साथीहरुले ताली पिटे । उनी लजाउदै केही नबोली बाटो लागिन भोलिपल्ट देखी साथी भाईले उनको र मेरो नाम जोडेर जिस्काउन थाले । खै त्यसपछी मेरो मनमा के चल्यो कुन्नी एउटा चिट्ठी लेखेर दिए । त्यतिबेला म कम्ती तड्पिन उनको उत्तरको लागि, सात दिन सम्म देख भेट नै भएन शायद रिसाइछिन क्यारे जस्तो लाग्यो तर आठौ दिनमा उनिले मेरो प्रेम प्रस्ताबलाई स्विकारेर पत्र पठाइन । संसारकै अंमुल्य चिज पाएको जस्तो भएको थियो मलाई ।
मेरो भिसा लागेछ मलेसिया तिर काम गर्न जाने । उनिलाई खबर गर्न मैले थामडाँडामै बोलाए । सुनसान रात थियो आकाशमा ताराहरु टिल्पिलाईरहेका थिए । उनी सुँक्क सँुक्क गरेर रुदै थीईन । अरे लाटी दुई बर्षा त हो नि ! पैसा कमाएर फर्केपछी तिम्रो आमाबाउ सँग हात मागेर डोली मा सजाउदै लैजान्छु तिमीलाई, मैले फकाउने कोशीस गरे ।
अँ यहाँ आफुलाई २ मिनेट नदेख्दा मुटु चुडिए जस्तो हुन्छ मुन्छे २ बर्षाको कुरो गर्छ । के बिदेश नै जान पर्छ र यही सानो तिनो केही गरे हुँदैन यती भन्दै उनी मेरो अंगालोमा घोप्टिदै डाँको छोडेर रोईन । म सँग कुनै उपाय पनि त थिएन न त उनिलाई यसरी रुँवाएर प्रदेशी हुनु रहर थियो । मनिसको जिन्दगी को सबै भन्दा ठुलो सत्रु नै गरीबी रहेछ जस्तो लाग्यो । दुई बर्षा जसरी पनि एकले अर्कालाई कुर्ने भन्दै माहारानीथानकी देबी लाई साक्षी राख्दै कसम खायौ । हाम्रो बिछोडको त्यो पल देखेर तल बगिरहेको काली खोला पनि रुदै बेस्सरी सुस्साइरहेको थियो ।
प्रदेश भनेको प्रदेश नै रहेछ जतिबेला पनि काम । घरमा सिन्को नभांँच्ने मलाई मलेसियाको जंगलमा काठहरु मेसिन मा चिर्दा आफ्नै मुटु चिरे जस्तो हुन्थ्यो आर्को तिर सोमाको याद ले पल पल छट्पटिन्थे । त्यो बेला मा अहिले जस्तो मोबाइल थिएन न गाउमा ल्याण्डफोन नै । चिट्ठी पठाएको ३ महिनामा मुस्किल ले उनको जबाफ पाए । उनिले लेखेकी थीईन जती टाढा भयो माया झन गाढा हुदोरहेछ दिपे ! उनका ति सब्द हरु पढ्दा अनायासै मन भरिएर आउथ्यो अनी एकान्तमा गएर धित मरुन्जेल रुन्थे । दुःख पछी सुख आउछ बिछोड पछी मिलन जाबो २ साल त बितिहाल्छ नि म घरको आवश्यकता र उनीसंगको मिलन को आसामा निकै मेहनत गरेर काम गर्थे । ३ ÷ ४ वटा पत्र आदानप्रदान मै समय ले बर्षा दिन काटेछ म बिदेश छिरेको पनि । मेरो हरसमय उनका तिनै मायाबी शब्दहरुले कोरिएका पत्रहरु पढेर बित्ने गथ्र्यो । मैले २ वटा पत्र पठाउदा पनि उन्को एउटा जबाफ आएन । मनभरी कुरा खेल्थे मेरा के गर्ने के नगर्ने कुनै मेसो नै थिएन , फोन गरौ न कुनै नम्बर छ पत्र लेख्यो जबाफ आउँदैन । घर बाट चिट्ठी आउँदा पनि उनको बारेमा केही लेख्दैनथे कसैले पनि, मेरो मन बेचैन थियो । मेरो मनमा संका बढेर आयो कतै उनको बिहे त भएन ? जसो तसो २० महिना काम गरेर बिताए तर त्यहा भन्दा बढी मलाई मलेसिया मा बस्नै मन लागेन । म फर्किए मेरो देश मेरी सोमा लाई भेट्ने अदभुत चाहनाहरु बोकेर ।
जसरी हजार सपनाहरु बोकेर मलेसिया पसेको थिए त्यसरी नै हजारौ सपनै बोकेर फर्केको थिए म आफ्नो देश फरक त्यती थियो जादा निरास मन अमिलो चेहेरा तर फर्किदा भने अनुहार भरी उमंगका तरंगहरु । सोमालाई भेटेर बिस महिना देखी मनमा संगालेका पिडाहरु सुनाउन चाहन्थे म त्यसैले एरपोर्ट झरेकै दिन गाडी चढेर गाउ तिर लागे । म गाउ पुग्दा पाखा भरी पहेंलै प्याउली फुलहरु फुलेका थिए , थामडाँडामा सल्लाका बोटहरु अग्ला अग्ला भएका रहेछन । मेरा नजरहरु उनिलाई देख्नको लागि आतुर थिए तर उनको अत्तोपत्तो पाईन । भोलिपल्ट गाउ घुम्दा थाहा भयो उनको त बिहे भईसकेछ पल्लो गाउतिर । बुढो भारतीय सेनामा भाएकोले बिहे गरेर उतै लगेछ । म भने भित्र भित्रै जले । यस्तो लाग्थ्यो कि मैले सुनेका यि खबरहरु झुट्टा हुन । उनी कही कतै मलाई नै कुरेर बसेकी छिन तर कल्पना र यथार्थमा धेरै अन्तर भइसकेको थियो । आफ्नो जिन्दगी आँफैलाई बिरक्ती लागेर आउथ्यो मलाई । बिरह लाग्दा त्यही थामडाँडामा पुग्थे जहाँ उनी र म माया साटेर घण्टौ कुरा गर्ने गर्दथ्यौ । थामडाँडा त्यही थियो, हामीले ढुङ्गामा कोपेका हाम्रा नामहरु पनि उस्तै थिए, पारीपट्टी देखिने त्यो धौलागिरी हिमालको मुस्कान पनि त्यस्तै थियो तर म र उनी फरक भईसकेका थियौ । थाहै नपाई हामी हिंड्ने बाटाहरु अलग भाईसकेका थिए, सँगै बाँच्ने सपनाहरु अधुरै थिए । सात जुनी सम्मा साथ दिन्छु भन्ने उनको माया झुट्टो भईसकेको थियो सबै भन्दा पनि हिजो मेरी हुन्छु भन्ने उनी अर्कैकी भईसकेकी थिईन । आँफैले आँफैलाई चित्त बुझाउदै जिन्दगी जिउने रहर बोकेर फेरी खाडी तिर छिरेको पनि धेरै बर्षा भैसकेछ आज ।
हो यस ! मान्छेलाई बिर्सिए पनि यादहरुलाई बिर्सिन नसकिने रहेछ । हामीले सँगै छोएका कालिगण्डकीका पानीहरु बगेर कहाँ पुगेका होलान कुन्नी , धौलागिरी हिमालमा कती हिउँहरु पग्लिएहोलान कती थपिए होलान तर हामीले बिताएका केही पलहरु जिन्दगी भरी लाई दाग बनेर रहिरहे मनभरी कहिले पनि पखाल्न नसकिने गरी । यती बेला नबयौबनहरु प्रेम दिबस भन्दै सामाजिक सन्जालमा उफ्रिएको देख्दा, यो शहरका तिरेमिरे लाइटहरु ले सजाँईएका प्रेम सन्देशहरु आँखाले पढ्दा खै किन हो मलाई त्यतिबेलाको हाम्रो फक्रिन नपाएको प्रेमको काहानी सम्झिन मन लाग्छ । अनि अनायासै तिमीलाई सोध्न मन लाग्छ
गरीबको माया तिमीलाई सस्तो लाग्यो
भन न भन ए छोडिजाने तिमी
धनीको माया कस्तो लाग्यो ?
कालन्तरमा पुगेर हामीले सँगै बिताएका ति पलहरुको याद आयो भने वा कही कतै पछाडि फर्केर हेर्न पुग्यौ भने मलाई माथिको प्रश्न को जबाफ दिनु है । अहिले लाई भने प्रेम दिबश को हार्दिक शुभकामना । गल्ती भए माफ गरिदेउ यो प्रेमिल मन लाई फेरि .......।
म बहुलाउन सक्छु
बिहानीको लाली सँगै
सितका थोपाहरु टल्किनुको सट्टा
सडकमा आगोहरु बलेको देख्दा
धर्तीलाई चुमेर उमंगित हुने पौरखी हातहरुमा
मसालहरु जलेको देख्दा
कठै ! म आँफै बेहोस हुन पुग्छु
किन मान्छेहरु नक्सामा च्यातिएका होलान
किन नबयौबनहरु ढुङ्गामुढामा उफ्रिएका होलान ?
कोरिएका रेखाहरु ले भोको पेट अबस्य भरिन्न
नाँगो जिउ अबस्य छोपिन्न
एकछिन सडकलाई रोक्दैमा
समयलाई पक्कै रोक्न सकिन्न
सडक मा शहीद हुँदैमा देश माथि उक्लिन्न
खै ! मैले नबुझेको कि मुन्छेहरु ले धेरै बुझेका हुन
हिजो गरीबका दिनहरु ल्याउने भन्दै
हातमा ढुङ्गा बोकेर सडकमा लडेको म
आज अरबका खजुरको बोटमुनी बसेर
पसिना पुछ्नुको पिडा कुन शब्दमा लेखौ
उता ! बुर्जुक शिक्षा पढ्दिन भन्दै
बन्दुक बोकेको भाई
आज मलेसियाका जङलमा काठ बोक्दै
धिक्कर्दै छ आफुलाई
पारी गाउकी सुनमाया थेबे
बर्गिय हित र जातिय मुक्तीको लडाईंमा घाइते
आज कुबेती साहुको घरमा लुगा र जुँठा भांँडाहरु संगै
धोइरहेकी छे खाटा बसेको घाऊँहरु
कोरियामा पल्लघरे काका बङगुर काट्दै
बिर्सन खोज्दै छन आफुले सडकमै हत्या गरेका सपनाहरुलाई
आखिर ! अकाट्य सत्य
देश बने पो हामी बन्ने रहेछौ
नेपाल रहे पो नेपाली रहनेछौ
तर तितो यथार्थता
पहिचानको लडाईं भन्दै पहिरन जलाएको देख्दा
कसैको स्वार्थले दाजुभाइहरु लडाएको देख्दा
मेरो मुटुमा हुटहुटी चलेर आउछ
दिमाखमा रिगटा लागेर आउछ
आखिर मेरो देश जस्तै
म पनि बिमारि पो भएछु
यस्तै हो भने
अब म बहुलाउन सक्छु .............!!
असारे नोस्टाल्जिया ................
छुपुमा छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौला
भदौरे झरीमा घुम ओढी फेरी त्यही धान गोडौला
सेउलीबजारकी साईली भाउजुले खुब मिठो भाका हालेर गीत गाउथिन भाउजु सँगै अरु रोपाहरहरु पनि लय मिलाएर गाउथे असारे गीत । भाउजुले थालेको गीत मा चक हाल्दै सेउली बजारकै गोरे दाई ले मोई लगाउथे अनी हामी बाउसेहरु पनि ओहोई ओहोई गर्दै कम्मर भाँचे जस्तै गरी नाच्दथ्यौ पनि । मानोे छरेर मुरी उब्जाउने यो असार किसानको लागि अती नै महत्वपूर्ण हुन्छ र त हामी बिहानै ५ बजे उठेर खेतमा नारिन पुग्दथ्यौ एक हल गोरु सँगै अनी फिर फिर उज्यालो हुँदा एक दुई वटा खेत का गराहरु हिलाम्मे पारिसक्थ्यौ । खेतालीहरु पनि बिहानै पुगेर बिउ उखेल्थे अनी हामीले तयार गरेको हिलाम्य खेतका गराहरु मा छुपु छुपु धान रोप्न थाल्थे । के केटाकेटी के बुढा बुढी सबैको भागमा काम पारीदिन्थ्यो असारले । छिमेकमा भाईचराको सम्बन्ध गाढा बनाइदिन्थ्यो अर्मा पर्मा गरेर सबै मिलेर खेती पाती गरिन्थ्यो । छिमेकमा आफु आफुहरु मिलेर आलो पालो काम गर्ने लाई नै पर्मा लाउनी भन्ने चलन छ । पहाडको जमिन न हो धेरै नभए पनि काम कठिन हुन्थ्यो आफ्नो त त्यही एक दुई दिनको मेलो थियो त्यही पनि काकाहरु अनी अरु पाँच सात घर मिलेर काम गर्दा असार त्यसै जान्थ्यो । जमिन नहुने हरु दिन गन्ती मा निमेक गर्दथे । पत्र पत्र परेर फाटेको बादलभित्र लुकेको घामका मधुरा किरणहरुले धर्ती मग्मगाउथ्यो । जतासुकै पानीका छहराहरुले सुसेली हाल्दथे । हरिया मकैका टुप्पामा सेता चम्किला धानचामारहरु लह लह झुल्दै नाँच्दै धानका बिउहरु लाई स्वागत गरिरहेको जस्तो आभास हुन्थ्यो मलाई । कसैका खेतमा काले र माले गोरुको एक हल हुन्थ्यो कसैको मा दुई । त्यो खेतको फाँट मलाई रङमन्च जस्तै लाग्दथ्यो अनी निकै रोमान्चित हुने गर्दथे । सरकारी कर्मचारी पनि बिदा मिलाएर खेतमा काम गर्दथे , शहरमा पढ्ने बिध्यार्थी पनि आफ्नो खेतको रोपाइको दिन पुगेकै हुन्थे सघाउन । कलेजका प्रध्यापकहरु मात्रै हैन भारत तिरका लाहुरेहरु पनि बिदामा गाउघर मै पुग्दथे त्यो असारमा । प्राय सबैको घर मा एक हल गोरु पालिएको हुन्थ्यो । एउटा छिमेकी ले अर्को छिमेकीलाई सघाउथे । माटो को सुगन्धले चारै तिर मग मग बसाउथ्यो मेरो गाँउ ।
तर अहिले परिस्थिती अर्कै छ । समय त उस्तै हो हिजो जुन गतिमा हिंडेको थियो आज उस्तै गतिमा तर मान्छेहरु बदलिए अझ भनौ जुग परिवर्तन भयो । मान्छेका चालहरु फेरिए अझ भनौ सोचहरु परिवर्तन भए या मनहरु । हिजो जस्तो छैन असार आज गाउघरमा न त गाउघर नै असार जस्तो छ । समयको हिसाब किताब गर्ने नै हो भने पनि असार सकिएर श्रावण लाग्न थालिसक्यो न खेतहरु रोपिएका छन न त पानीका छहराहरु ले सुसेली हालेका छन । यती बेला प्रकृतीले पनि ठगेको छ किसानलाई । भर्खरै महाभुकम्पको ब्रर्जपात बाट उठेका हामीलाई मध्य मनसुन लागिसक्दा पनि बर्षा हुन सकेको छैन जस्ले गर्दा रोपाइ ढिला भएको त छ नै झन खेतमा उम्रिएको बिउपनी सुकेर मर्ने हो कि भन्ने डर बढेको छ । मनमा खडेरी त लागेकै थियो झन प्रकृतीले पनि खडेरी थपिदिदा कस्को दिल नचहराउला र ?
अर्को तर्फ न हली खोजेर पाईन्छ न त बाउसे नै भेट्टाउने अवस्था छ गाँउमा । छोरो बिदेश पसे पछी केटाकेटी च्यापेर बजार झरेकी बुहारीलाई पनि झर्को लाग्छ रे गाँउ उक्लिएर खेतको हिलो मा खुट्टा छिराउन । पैसो भन्ने चिज पनि यती सस्तो भयो कि आफ्नै हातले उब्जाएको आर्गनीक चामल भन्दा बजारमा पाइने उसिनेको चामलको भात मिठो लाग्न थाल्यो । आफ्नै हात ले मुंग्रोमा खाँदेको अमिलो मिठो सिन्की भन्दा बजारमा आयातित बट्टाको रासायनिक अचारले जिब्रोको स्वाद बिगारिदियो घरजहानको । मुलत देशमा चर्केको जनयुद्द पस्चात युबाहरु बैदेशिक रोजगारी को लागि बिदेश पस्ने क्रम तिब्ररुपले बढेर गयो । हिजो भारत सम्म पुगेर मजदुरी गर्ने नेपाली युबाहरु आज मध्यपुर्बका देशहरु साउदीअरब, दुबइ, कतार, कुबेत लगायत फारइस्ट मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिङापुर हुँदै कोरिया जापान का गल्ली गल्लीमा मजदुरी गरिरहेका छौ । कारण जे जस्ता भए पनि गन्तब्य जहाँ कही भए पनि उदेस्य सबै को एउटै हुन्छ धन कमाउने । आफ्नै पैसाले आफुलाई नै बेचेर धन कमाउन हिंडेका हामी प्रदेशीका सपना आफुले बोकेर ल्याएका झोलाका कपडाहरु भन्दा धेरै हुन्छन तर फरक त्यती मात्रै हुन कसैका केही पुरा हुन्छन भने धेरैका अधुरा । आफु पालिएको, आफुलाई हुर्काएको धर्तीलाई बाँजो राखेर पराइको माटोमा पसिना चुहाउनु रहर त कस्लाई पो हुन्थ्यो र आखिर तर पापी पेट्को सबाल छ भन्ने नाउमा हाम्रो महत्वकांक्षले पनि हामीलाई मजबुर बनाएको पक्कै छ । हिजो खेतमै पसिना बगाएर हासिखुसीले परिवार पालेका काकाहरु पनि बुढेसकालमा पासपोर्ट बनाएर मलेसियाका जङलमा काठ बोक्न पुग्नु भएको छ । प्राइभेट स्कुलमा पढाउदै किरना पसल चलाएर महिनामा बिस हजार सजिलै बचाउने मास्टरसाबहरु पनि बिदेशकै धनको धक धकीले दुबइको कोल्ड स्टोरमा काम गर्दै औंला भाँच्नु हुन्छ अनी हिसाब निस्किन्छ मुस्किल ले २५ हजार । के हामी सबै वाध्यता ले यो गरीरहेका छौ त ? के हामी नेपाली युबा सबै खाना नपुगेरै मुग्लान छिरेका छौ त ? कि हामीलाई हामी भित्र को धन कमाउने महत्वकाँक्षले दिन प्रतिदिन यो मोहको दल दलमा धसिरहेको छ ? या त देखासिकी मा बढीरहेका असिमित आवश्यकताहरु ले धकेलिरहेका छन मुग्लानतिर । प्रश्नहरु अनगिन्ती छन तर आफ्नो मनलाई सम्झाइ बुझाई गर्ने गतिलो उत्तर कतै बाट पनि आउन सक्दैन । हामी बिचलित छौ अनी बेचैनी छौ र त धर्यता र लगनसिलता जस्ता मुल्यवान चिज गुमाइरहेका छौ दिन प्रतीदिन । फरक केही पनि थपिएको छैन जिन्दगीमा भरीएको छ त केबल लोभ लालच अनी ढोगीपन । जिन्दगीभर अरबको मरुभुमी मा पसिना बगाएर शहरको एउटा कुना मा दश हात जग्गा किनेर दुई तले घर बनाउनु नै प्रगती गर्नु हो भने यही प्रगती गरिन्जेल गुमाएका चिजहरुको हिसाब किताब गर्ने कहाँ छ क्याल्कुलेटर ? भेडाबाख्राको बथान जसरी हामी बिदेश पस्नाले पनि बिदेशीहरु को नजर मा हामी गरीब कहलिएका हौ कि जस्तो लाग्छ मलाई त । हुन त कर्णाली को भोक र राजाधानीको तिर्खालाई बुझ्न नसकेका र दलिय स्वार्थ बोकेर सत्तामा आसिन भुँडीलाहुरे (नेताहरु) ले राज गरेर टाट पल्टिन लागेको राज्यको गरीब किसानको छोरो म प्रदेसको गल्ली मा चौकीदारी गर्दै हिसाब गर्ने हैसियत कहाँ राख्न सक्छु र ?
जे होस खेती पाती गर्ने त्यो असारलाई सम्झेर आजै घर मा रहेकी एक्ली बुढी आमालाई फोन गर्न भ्याए । कुरैकुरामा मान्छे खोजेर खेत रोप्नु होला है भन्न् पुगेछु । “सबै त जस्तै घर भन्दा प्रदेश प्यारो ठान्छन, को छन र गाँउमा छोरो मुन्छे अहिले” आमाको उत्तरले म झसँग भए । हो त नि को छन र गाँउमा अहिले अनी रोपिदिन्छन मेरो खेत ? एकफेरी निधार खुम्चाएर सम्झिए गाउघरलाई, पुछारदेखी सिरान सम्माका घरमा डुलाए नजर । तल दिले दाई कतार, मास्तिर तिले दाई साउदी, पल्थिर सेते काकाको छोरो कोरिया, बाटाघरे पण्डितको छोरो जापान, डरमुनीका पुर्ने दाई युरोप, डांडाथोक का बिबस दाई अमेरिको डिभी परेर सपरिवार उतै, बिचरीथरका साइला मामा क्यानाडा, पल्लो गाउकी लक्ष्मी भाउजु कुबेत, डाँडाघरे मास्टरबा कि छोरी दिपिका इजरायल अनी म घरको जेठो छोरो दुबइ । सरकारी जागिर खाएका प्राय परिवार सहित शहरतिर बसाइ सरेछन । उफ हो त नि सिंगो गाउ त खाली नै रहेछ । यसरी नै नबयौबनहरु सबै बिदेशतिर हिंड्ने हो भने गाउँ एका एक बृद्दआश्रम पो बन्ने हो कि ? मेरो गाउ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै होला आखिर देशको कुन गाउँ बाँकी होला र अहिले त्यस्तो जहाँका युबाहरु प्रदेश नहिडेका हुन । सम्झेर ल्याउदा मन अमिलो भयो शरीरमा चिट चिट पसिना आउन थाल्यो । कल्पना कल्पनै मा ति असारे झझल्कोहरु आउन थाले । हरियो धानको बिउ हिलो मा छुपु छुपु रोप्दै हिलो खेल्ने ति दिदीबहिनी भाउजु हरुलाई सम्झिए , ब्याडमा बसेर बिउ काट्दै खेताल्नीहरु लाई बिउ पुराइदिने ति काकी अनी हजुरआमाहरु लाई सम्झिए । बिहानै उठेर खेतमा हल नार्ने सेउली बजार का गोरे दाई लाई सम्झिए अनी मिठो भाका हालेर असारे गीत गाउँने सेउली बजार कि साइली भाउजु लाई सम्झे, फेरि आफ्नै जिन्दगीलाई सम्झे । असारको छिपे छिपे हिलोमा धान रोप्न जती सजिलो थियो त्यो भन्दा गार्हो रहेछ प्रदेशको तातो बालुवामा धसिएको जिन्दगीलाई निकाल्न । दगुर्दा दगुर्दै झिपिक झिपिक गर्दै ट्राफिक लाइटमा रोकिएको गाडी जस्तै लाग्न थाल्यो आफ्नो जिन्दगी जहाँ जता गए पनि रेड सिग्नल मात्रै छन । मनमा तनाब थपिए पछी फेसबुक खोले अनी स्टाटस अपडेट गरे
असारे हिलो छुपु मा छुपु खेतमा धान रोप्दै
रुँदीहुन आमा आलीको डिलमा बसेर मुख छोप्दै
अनी मेरो आँखामा टिलपिलाएका आसु पुछ्दै सिरक ले मुख छोपेर सुते । भोली पल्ट बिहानै उठेर हेरेको १०० लाइक आएको रहेछ नआओस पनि किन म जस्तै सबै दौतरीहरु भाई भतिजा जो जस्ले लाइक गरे सबै म जस्तै प्रदेशको कुनामा बसेर रोइरहेका छन फेसबुक चलाऊदै । आखिर कहिले सम्मा यो निरन्तरता ??
बेनी साप्ताहिकमा प्रकासित
यती बेला समुन्द्रको किनरामा उभिएर म छालहरु मा तिम्रो तरंगहरु खोजिरहेको छु । ऊँ त्यो पर देखिने तीन तले पानी जहाजले छालहरु छिचोल्दै हजारौ मान्छेहरु लाई गन्तब्यमा पुर्याउन हिडिरहेको छ तर म पिजँडाको चरी झै तिम्रै यादहरु मा कैद भईरहेको छु । थाह छैन मनरुपा म आँफैलाई यि अघोषित कैद सजाँय को सिमा रेखा कती लामो छ भनेर हुन सक्छ यो ज्यान मा रक्त संचार भए सम्म यो संजाय भुक्तान गरिरहनु पर्छ मैले ।
हिजो जस्तै लाग्छ मलाई त्यो कालीगण्डकी को किनार किनरै तिमी र म हात समाएर हिंडेको । त्यतीबेला तिमीले भन्थ्यौ मनिसको जिन्दगी पनि यही गण्डकी जस्तै हो जसरी अनेकौ चट्टान सँग जुँध्दै यो नदी निरन्तर बगिरहन्छ गन्तब्यमा पुग्नको लागि त्यसरी नै हाम्रो प्रेमिल यात्रा रोकिने छैन कुनै चट्टानमा ठोकिएर या बिन्दु मा कोरिएर । हो मनरुपा तिमीले भने जस्तै म बगिरहे, निरन्तर ठोक्किए अनेकौ भिमकाय चट्टानहरुमा, छिचोलिए धेरै खोल्साहरुमा अनी घोलिए धेरै बालुवाहरु मा तर पत्तै भएन मलाई तिमी कती बेला फुत्कियौ मेरो हातबाट अझ भनौ मैले सोच्नै सकिन तिमी पनि एउटा चट्टान मा ठोक्किदा बग्ने धार परिवर्तन गर्न सक्छ्यौ भनेर । फलस्वरुप आज म संसारकै होचो गल्छी कालिगण्डकी जस्तै गहिरो चोटहरु बोकेर जिउन बाध्य छु थाह छैन शायद धौलागिरी जस्तै अग्ला खुशीहरुले तिमीलाई चुमेकी चुमेनन । यिनै गहिरा चोटहरुमा तिमीलाई सम्झिन पाउदा म एकदमै खुशी हुन्छु मनरुपा । माफ गर मलाई तिमीलाई खुशीहरु को गुच्छामा उन्न नसकेर नै यि चोटहरुमा बारम्बार मिसाइरहेको छु । आखिर मान्छेको जात स्वार्थी हुन्छ म आफ्नो खुशीको लागि तिमीलाई सपनामा देख्ने गरेको छु । एक पल को खुशीको लागि हजार पलहरु झुटो बोल्ने गर्छ मान्छे हो त्यही मान्छे भित्र को अर्को मान्छे म तिमीलाई नाम दिन्छु भनेर झुट्टो बोल्दै आँफै गुमनाम हुन पुगे । यो समाज भन्ने जिनिस पनि अचम्मकै रहेछ मनरुपा । नमिल्नुपर्नेहरुलाई मिलाइदिन्छ, भेट्नुपर्नेहरुलाई छुट्टाइदिन्छ, दुँनियाका सपनाहरु लुटाइदिन्छ । मान्छे मान्छे बिच पर्खाल खडा गर्छ त फलानो जातको म फलानो जात भन्दै हिड्छ । हेर त मनरुपा के यो मान्छे ले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई बनाएको हैन र ? आखिर के छ यो जातमा ? तिमीले पिउने पानीमा पनि त्यही प्यास छ जुन मैले पिउने पानीमा पनि भने मैले छुदा जुट्ठो अनी तिमीले छुँदा चोखो कसरी भयो ? फेरी तिम्रो शरिरमा बग्ने रगत जस्तै रातो मेरो शरिर मा पनि रातै छ भने कसरी तिमी ठुलो जात कि अनी म तल्लो ? कस्तो अचम्म छ है मनरुमा यो सामाजिक परम्परा ! मैले सिलाएको कपडाहरु बिष्टहरुको घर भित्र लैजानु हुने तर म उनिहरुको दैलो नाघ्योकी अछुत हुने ? मैले बनाएका भाँडाकुडामा बिष्टहरुले भात खान हुने तर बिडम्बना तिनै भाँडा बनाउने मेरा श्रीजनसिल हातहरुले छोएको पानी नचल्ने ? यो त सब मनिसहरुले सृजना गरेको बन्धन हो मनरुपा, यिनै बन्धनहरु लाई तोड्नु पर्छ भनेर नै हामीले माया लाएको हैन र ? माहारानीथानको डिलमा बसेर तिमीले नै भनेकी थियौ एउटा ढुङ्गाको मुर्तिलाई खुशी बनाउन म हजारौ फुलका कोपिलाहरु चुड्न सक्दिन भनेर । म त्यती बेला आफुलाई निकै गर्व गर्थे तिमी जस्तो चेतनशिल नारिको प्रेमी भएर उभिन पाउदा । आज ति कुरा हरु सम्झिदा पनि तिम्रा तस्बिरहरु हेरेर अनयासै मुस्कुराइरहन्छु म ।
अर्को तर्फ यो धन भन्ने पनि एउटा नामको चिज रहेछ , दिन दुइगुना रात चौगुना धनको महिमा चुलिएर गएको छ । त्यसैले हेर त हाम्रो समाज धनहुने लाई पूजा गर्छ डोला मा चढाएर सुमेरु पर्बत घुमाउन खोज्छ तर धन नहुनेलाई कस्ले सोध्छ , कस्ले बुझ्दछ ? यही धनको प्रभाब ले नै यहाँ हजारौ प्रेमका डोरिहरु बाँटिएर नसकिदै चुडिन्छन अनी त मुना मदन लैला मन्जुलहरु लेखिन्छन । दुँनियामा मनिसको ठुलो सत्रु भनेकै गरीबी रहेछ हो यही गरीबी मा फक्रेको हाम्रो पिरती ले सामाजिक बन्धन लाई तोड्नु भनेको लगभग कालीखोलालाई उल्टो बगाउनु जस्तै थियो त्यसैले तिम्रो मन रुवाएर म प्रदेश हिंडेको थिए । सदियौ देखी चलेको सामाजिक चलनलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि कम्तिमा तिमीलाई तिम्रो घर देखी भगाएर मेरो झुपडी सम्म ल्याउन पनि मैले धन कमाउनु जरुरी थियो । तिमी मेरो जिबनको दियो थियौ मनरुपा त्यो दियो जलाउनलाई पनि म सँग तेल हुनु जरुरी थियो त्यसैले म तेल किन्ने पैसा कमाउन प्रदेश पसेको थिए । तिमीले भुल्यौ कि कुन्नी मलाई त पल पल तिनै क्षणहरुले सताउछन मनरुपा । जेठ महिना को गर्मी थियो काली र म्याग्दीखोला बेजोड सुस्साइरहेका थिए त्यो भन्दा पनि धेरै तिमी सुँक्क सुँक्क गरेर रोएकी थियौ । तिमी जती आँखा मा आशुहरु टिल्पिलाउदै रोएकी थियौ त्यो भन्दा धेरै म मुटु चर्काएर रोएको थिए । माथि हाँडेभिरको काप मा फुलेका दुई थुङा गौथली फुलहरु पनि ओईलाए जस्तै देखिएका थिए हाम्रो बिछोडको त्यो पलमा । म हात हल्लाउदै काली खोलाको पुल तरेर हिंडे तिमी रुदै गाउँ फर्केकी थियौ । त्यसपछिका दिनहरु त मलाई सम्झिनै मन लाग्दैन मनरुपा । अहिले जस्तो सेकेण्डमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने, एड हुने, राता राता लाईक आउने, प्रेम हुने अनी सेकेण्ड भर मै ट्र्याजेडी हुने प्रेम थिएन हाम्रो । एउटा चिट्ठीको उत्तर पाउन कम्तिमा पनि तीन महिना कुर्नै पर्दथ्यो । त्यो तीन महिना मेरा कसरी बित्ने गर्दथे म शब्दमा लेख्न पनि सक्दिन मनरुपा तर हरेक तीन महिनामा तिम्रो पत्र नभएर तिमी नै मेरो सामु उभिएकी जस्तो हुन्थ्यो मलाई । तिमीले लेख्ने गर्थ्यौ “ज्यान जती टाढा भयो झन उती माया बढ्दो रहेछ भनेर” तर त्यसरी बढेको तिम्रो माया अन्त त उम्लिएर पोखियो अर्कैको खेतबारिमा । जेठ महिनै थियो त्यो पनि हाँडेभिरमा फुलेका गुँरास हरु ओईलिएर झर्दै थिए, अर्थुङेको पाखाभरी प्याउली पहेलिदै थियो, खेतमा घोगा लागेका मकैका बोटहरु धानचमार हल्लाउदै प्रदेशीको बाटो कुरीरहेका थिए तर समाजलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने तिम्रो मन आँफै परिवर्तन भएको रहेछ । सहनाई फुकेर ढोलागी बजाउदै डोली चढेर गयौ त्यो भन्दा पनि जुगौ जुग तिमीलाई साथ दिन्छु भन्ने तिम्रो कसम आँफैले तोड्यौ । सिउँदो तिम्रो तर अर्कैको नामको सिन्दुर भरियो, गला तिम्रो तर मंगलसुत्र अर्कैको भयो, नाम तिम्रो तर पुछारमा अर्कैको थर झुन्डियो । धन्य तिमी पवित्र भयौ, चोखी भयौ, कुलकी छोरी÷बुहारी भयौ जहाँ गए नि पानी चल्ने भयौ, संसारकै सबैभन्दा ठुलो जातकी भयौ । मैले देख्दा अरु कसैकी सम्पत्ति भयौ । म हिजो पनि सानो थिए आज पनि सानै जातको छु मनरुपा ! आखिर हामी पानी नचल्नेको माया कहाँ चोखो हुदोरहेछ र ? ढुङ्गाको मुर्तिले त हामीलाई बिभेद गरिरहेको छ भने तिमी त मान्छे हौ पलभर मै कोल्टे फेर्नु के ठुलो कुरा भयो र ? अन्त त हाम्रो मायामा पनि बैसरीको पहिरो खस्यो अनी एकाएक पुरिदियो ति समाज परिवर्तन गर्ने अठोटहरु है ! मनरुपा । आखिर सत्य तितो नै थियो तिमी अर्कैकी भैसकेकी थियौ ।
हरेक चिजको महत्व अभाबमा मात्रै बढ्ने रहेछ । मेरो जिबन मा तिम्रो कती महत्व थियो शायद तिमीलाई आभास हुने कुरै भएन तर तिमी बिनाको जिन्दगी कसरी बाँचेको छु त्यो मलाई मात्रै थाहा छ । मेरो चारै तिर हाम्रो पिरती ले दिएको चोटहरुका बास्नाहरु मगमगाउदै फुलिरहेका छन म तिनै बास्ना सुँघेर बाँचिरहेको छु एउटा मिनपचासे जिन्दगी मनरुपा । मलाई राम्रो सँग थाह छ जेष्ठ महिना सकिनै लागेको छ त्यहाँ, तिमीले पनि दशौ बर्षागाँठ मनाइसक्यौ तर मैले दशौ जुनी सम्म पनि सक्दिन तिमीलाई भुल्न आखिर यिनै शब्दहरुको क्यानभासमा कोरिएर तिम्रो नाममा जिउन बिबस छु मनरुपा । ति हाम्रा मेटिएर पनि नसकिएका कहानीहरु बारम्बार मेरा आँखा बाट चिप्लिएर लड्ने गरेका छन ।
बिचरा ! ति हाम्रा अधुरा कहानी ।
लोकनृत्य प्रतियोगितामा नेपाल मगर संघ पोखरा प्रथम